DEG DEG: Ciidamada huwanta oo lawareegay gacan kuheynta xarunti Al- Shabaab ee dagmada Buula Burde | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka DEG DEG: Ciidamada huwanta oo lawareegay gacan kuheynta xarunti Al- Shabaab ee...
DEG DEG: Ciidamada huwanta oo lawareegay gacan kuheynta xarunti Al- Shabaab ee dagmada Buula Burde
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo wada jir ah ayaa gelinkii dambe ee maanta la wareegay degmada Buulo Burde oo aheyd saldhigii ugu weynaa Al-Shabaab ku laheyd bartamaha Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada huwanta oo labo jiho ugu soo ruuqaansaday degmada ayaa iska hor imaad xoogan kala kulmay Xoogaga Al-Shabaab, waxaana iska hor imaadka uu ka dhacay dhinaca galbeed ee magaalda.
Wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab xalay ilaa saakay ka baxayeen degmada Buulo Burde, waxaana sidoo kale ka barakacay shacabkii ku dhaqnaa degmada oo u qaxay deegaanada miyiga.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jabuuti oo labo jiho ku soo kala baxay ayaa ugu dambeyn u suura gashay inay qabsadaan degmada Buulo Burde oo noqoneysa degmadii u horeysay ee Gobolka Hiiraan laga saaro, iyadoo gelinkii hore ee maanta ay qabsadeen deegaanka Buq-aqable.
Ilaa iyo hada lama oga qasaaraha ka dhashay dagaalada ka dhacay inta u dhaxeysa Beledweyn iyo Buulo Burde oo ay ciidamada huwanta la kulmeen intii ay ku soo wajahnaayeen degmada Buulo Burde,
Degmada Buulo Burde ayaa ah degmo muhiim ah oo istiraatiiji ah, waxaana ay isku xirtaa Gobolada dhexe, waxaa ka baxda wado muhiim ah oo aada dhinaca Ceelbuur oo ka tirsan Gobolka Galgaduud, halkaasoo iyana ka mid ah meelaha Shabaabka ku xoogan yihiin.
Previous articleRa’iisal wasaaraha Soomaaliya oo si dag dag ugu ambabaxay Dalka Ethoopiya
Next articleGo’aanada shirka IGAD oo lagu taageeray kala qeybinta Soomaaliya